कोहलीलाई पराजित गर्न धोनी तयार, बलरकालागि विशेष योजना » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शनिबार, बैशाख २२, २०७५ १६:३२ मा प्रकाशित !
एजेन्सी। आइपीएलको ११ औं संस्करणमा चेन्नई सुपर किंग्सले आफ्नो दोस्रो घर महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) स्टेडियममा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको सामना गर्दैछ। चेन्नईलाई यसअघिको खेलमा कोलकाता नाइट राइडसले पराजित गर्दै अंक तालिकामा पहिलो स्थानबाट तल झारेको थियो। सो हारबाट आहत भएका कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको टीम यो खेल जसरी पनि जित्दै अंकतालिकामा पहिलो हुने दाउमा छ।
चेन्नईले यो सीजनमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ।
तर यसअघिको खेलमा वलर र फिल्डिङ दुवै कमजोर थियो। यो विषयलाई धोनीले पनि स्वीकार गरेका छन्। धोनीले यो पटक बलरको मोर्चालाई परिवर्तन गर्ने संकेत गरेका छन्। ब्याट्सम्यानको टीमको प्रदर्शन निकै राम्रो छ। फाफ डु प्लोसिस र शेन वाटसनको जोडीले टीममा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। सुरेश रैनाबाट निकै ठूलो पारीको अपेक्षा गरेका छन्।
उता ब्रावो र धोनीले पनि निकै राम्रो खेल खेलिरहेका छन्। वलरमा लंगी नगिदीले दुई खेलबाट प्रभावित पारेका छन्। युवा केएम आसिफले पहिलो खेल राम्रो प्रदर्शन गरेपनि अर्को खेलमा राम्रो गर्न सकेनन्। धोनी यो क्षेत्रमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छन्। कर्ण शर्माको स्थानमा लेग स्पिनर इमरान ताहिरलाई खेलाउने संभावना छ।
बेंगलोरको कुरा गर्दा टीम विराट कोहली र डिविलियर्सको दममा खेलिरहेको छ। यद्यपी मुम्बई इण्डियन्स विरुद्धको खेलमा उसको बलरले पनि राम्रो खेल प्रदर्शन गरेका थिए। कोहलीलाई आफ्ना बलरले फेरिपनि राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा छ। ब्याट्सम्यानमा कोहली र डिविलियर्स बाहेक अन्यले खासै प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। बलरमा युजवेन्द्र चहल र वाशि)गटन सुन्दर माथि भरोसा छ। उमेश यादवलाई पनि आफ्नो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवस्यकता छ।
PREVIOUS POST Previous post: राष्ट्रपतिद्वय ट्रम्प र मुनबीचको भेटवार्ताका लागि स्थान तोकियो
NEXT POST Next post: आजको दिन तपाईहरुको लागि कस्तो छ, हेर्नुस आजको राशिफल
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, बैशाख २२, २०७५ १६:३२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, बैशाख २२, २०७५ १६:३२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, बैशाख २२, २०७५ १६:३२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, बैशाख २२, २०७५ १६:३२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, बैशाख २२, २०७५ १६:३२